Vlamertinge musha uri munharaunda yeBelgian yeWest Flanders uye bhuti reguta reYpres. Musha weVlamertinge uri kunze kweguta reYpres, mumugwagwa mukuru N38 kusvika kuguta riri pedyo rePaperinge.
Mukuwedzera kune nechepakati peguta re Ypres pachako, Vlamertinge ndiro guta guru reYpres. Kumadokero kweVlamertinge, mumugwagwa unoenda kuPaperinge, ndiyo nyundo yeBrandhoek.
3 Demographic developments
Nhoroondo[chinja | edit source]
Nhoroondo yekutanga pamusoro peVlamertinge inobva kubva kuMiddle Ages. Muna 857 chivako chakavakwa. Muna 970 Ypres yakaparadzwa uye temberi yeVlamertinge yakapisa. Nyaya yakare-kare, inozivikanwa kuti iwedzere, iyo inosanganisira zita rinonzi Flambertenges, ibasa regore ra1066. Baudouin van Lille, nhamba yeFlanders, mudzimai wake Adela nemwanakomana wavo Baudouin, mubhuku iri vakapa zvinhu kukereke uye chitsauko kubva kuSint-Pieters kuLille. Zvinhu izvi zvaiva pakati pevamwe chegumi chiri muElverdinge uye chegumi chiri muVlamertinge - In territorio Furnensi, in villa Elverzenges, decinam unam ; Flambertenges decinam similiter unam.
Pasi pehurumende yekare, Vlamertinge aiva makore makumi maviri nemaviri shure kwekubwinya kweVeurne-Ambacht uye akatambura zvikuru kubva kumaieges eYpres ari pedyo.
MuHondo Yenyika Yokutanga, musha wose wakaparadzwa nekuputika. Muna 1944, panguva yeHondo Yenyika Yechipiri, Vlamertinge yakasunungurwa nePoland yakashongedzwa nemauto.
Geography[chinja | edit source]
Vlamertinge mamiriyoni 17 kumusoro kwegungwa. Muguta uyuwo unopinda kumakomo eYpres muEast, Voormezele muSouth-East, Kemmel uye Dikkebus muZouth, Reningelst kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, Poperinge kumadokero, Elverdinge muNorth uye Brielen iri kumaodzanyemba.
Demographic developments[chinja | edit source]
Kubva muna 1487 kusvika muna 1697 kwaive nekuderera kukuru kwevanhu veVlamertinge. Tsanangudzo yakajeka zvikuru yeiyi ingadai yakave yeEighty Years 'War muNetherlands. Pakati peHondo Yenyika Yekutanga, nhamba yevanhu yakaramba zvakare. Izvi ndezvokuti pedo neYpres, iyo yakanga iri iyo pamberi peguta, yakanga iine bhomba zvikuru uye Vlamertinge akatamburawo zvikuru kubva pamhirizhonga iyi yebhomba.
Zvitsva[chinja | edit source]
Vhechi yeShedheni Vedastus
Iyo yaimbova imba yeVlamertinge kubva muna 1922, mumutauro weNeo-Flemish Renaissance
The Castle of Vlamertinge kana Castle of Parc yakavakwa muna 1857-1858 nekurairwa kweViscount Pierre-Gustave du Parc, mushure mekugadzirwa naJoseph Schadde.
MuVlamertinge pane mazita emakuva ekuBrithani ehondo kubva kuHondo Yenyika Yekutanga:
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlamertinge&oldid=56251"
This page was last edited on 19 Kurume 2018, at 18:26.